थप एकमा कोरोना पुष्टी | Janaandolan
Home समाचार समाचार थप एकमा कोरोना पुष्टी
थप एकमा कोरोना पुष्टी
मोरङ–सुनसरीका मस्जिदमा अनुगमन तीब्र
विर्तामोड ६ बैशाख । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका झुल्केस्थित मस्जिदमा बसेका थप एकजना भारतीय नागरिकमा कोरोना संक्रमण भएको पाइएको छ । त्यहाँ रहेका १ नेपालीसहित १२ जना भारतीय नागरिकमा शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको थियो । सोही मस्जिदमा बस्ने अर्का एक भारतीयको स्वाव परिक्षणमा कोरोना पुष्टी भएको
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शनिबार ६५ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेपछि नेपालमा कोरोना संक्रमीतको संख्या ३१ पुगेको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. बासुदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको स्वाव परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
शुक्रबार कोरोना संक्रमीत पुष्टी भएका भारतीय नागरिक र त्यहाँ रहेका अरु तीन नेपालीलाई शुक्रबार राति मोरङको टाँडीस्थित क्वारेन्टाइनस्थलमा लगिएको थियो ।
कोरोना संक्रमीत ३१ मध्ये दुईजना निको भएर घर फर्किसकेको पनि डा. पाण्डेले जानकारी दिए ।
यसैबीच उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका झुल्केस्थित एक मस्जिदमा आश्रय लिएर बसेका एक नेपालीसहित १३ जनामा कोरोना पुष्टी भएपछि मोरङ र सुनसरीका विभिन्न मस्जिदमा अनुगमन तीब्र पारिएको छ । शनिबार गरिएको अनुगमनका क्रममा मोरङ र सुनसरीका मस्जिदमा १२ नेपालीसहित ९१ जना विदेशी नागरिक भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ । जसमध्ये मोरङको सुनबर्सी र धनपालथान गाउँपालिकाका र सिक्टी क्षेत्रमा रहेको मस्जिदमा ३१ जना विदेशी नागरिक बसेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार धार्मिक गतिविधिका लागि आएर बस्नेमध्ये ९ पाकिस्तानी र १० भारतीय छन् भने सिक्टि क्षेत्रमा १२ नेपाली नागरिक छन् । प्रहरीका अनुसार धनपालथान गाउँपालिका–७ को जामे मस्जिदमा १० भारतीय नागरिक नेपालमा लकडाउन शुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि बसिरहेका छन् ।
जहदा गाउँपालिकामा पर्ने सिक्टी क्षेत्रमा भने १२ जना नेपाली बसेका छन् । मस्जिदमा भेटिएका सबै मुस्लिम धर्म गुरुहरू भएको र उनीहरूको रयापिड टेस्ट गर्दा एण्टिबडी नेगेटिभ देखिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले मस्जिदमा बसेकाहरु प्रहरीको निगरानीमा रहेको बताए ।
धनपालथान गाउँपालिकाले भारतीय नागरिक बसोबास गरिरहेको मस्जिदलाई नै क्वारेन्टाइन बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिलाल सिंहले जानकारी दिए । त्यहाँ आश्रित सबैको रयापिड टेष्ट गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएको छैन ।
यता सुनसरीका विभिन्न मस्जिदमा गरिएको अनुगमनका क्रममा पाकिस्तान र भारतबाट आएका ७२ जना विदेशी नागरिक भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डीएसपी विनोद शर्माले बताए । उनका अनुसार उनीहरु सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
Previous articleबृद्धाश्रमलाई एबीसीद्वारा तरकारी सहयोग
Next articleप्रदेश १ मा ४ हजार ४९ जना होम क्वारेन्टाइनमा
समाचार समाचार थप एकमा कोरोना पुष्टी